Iwe unoda here kuva munyori? Tevedza aya matipi kubva Umberto Eco | Zvazvino Zvinyorwa
Vanoti kana chirongwa chitsva chikaitwa, rubatsiro nerutsigiro rwunopihwa ishoma ... Zvakanaka, iwe unofungei kana ndikakunyorera iyo Matipi mashanu akapihwa naUmberto Eco mune chirevo kune avo vanoda uye vanoda kuve vanyori?
Pano unavowo mumwe nemumwe, uye kana iwe uchida kuvateerera kubva pamuromo wavo, isu tichaisa vhidhiyo pazasi:
Usafunge kuti iwe uri "muimbi".
Usazvikoshesa zvakanyanya, ndiko kuti, usarega yako ego ichikudzikisira uye ichikutadzisa kuenda kumberi.
Usafunge kuti zvese zvinhu kurudziro, ibasawo. Kunyora kunotora 10% kufemerwa uye 90% ziya.
Usamhanye kunyora bhuku. Haufanire kuburitsa bhuku gore rega rega, nekuti ipapo unorasikirwa nerunako rwekugadzirira iyo nyaya.
Iwe haugone kuve mukuru pasina kuve musoja kare, ndiko kuti, enda nhanho nhanho. Usanyepedzera kuhwina mubairo weNobel nekukasira uye nebhuku rimwe chete rakaburitswa. Izvi zvirevo zvinokanganisa chero basa rekunyora.
Mamwe "maparera" emunyori weItari
Uye kana iwe uchiri kuda kudzidza zvakawanda kubva paruoko rwaUmberto Eco, heano mitsara gumi yaakataura panguva iyoyo achireva zvinyorwa zvese:
«Munyori anofanirwa kufa mushure mekunyora basa rake. Kugadzira nzira yechinyorwa.
"Hapana chinhu chinonyaradza munyori wenhau kupfuura kutsvaga kuverenga izvo zvainge zvisina kuitika kwaari uye izvo zvinoratidzwa nevaverengi."
"Munyori haafanire kupa dudziro yebasa rake, kana zvisiri, sei angadai akanyora novel, unova muchina wekugadzira dudziro?"
"Kune mabhuku ari eruzhinji, uye mabhuku anozviitira veruzhinji."
"Mabhuku anoremekedzwa nekuashandisa, kwete kuvasiya vega."
"Nyika izere nemabhuku akanaka asina anoverengwa nemunhu."
“Mabhuku ndeaya marudzi ezviridzwa izvo, kana zvakangogadzirwa, zvaisakwanisa kuvandudzwa, nekuda kwekuti zvakanaka. Kunge sando, banga, chipunu kana chigero ».
"Mabhuku haana kugadzirirwa kufunga, asi kuti aongororwe."
"Basa renhau nderokudzidzisa nekunakidza, uye zvarinodzidzisa kuziva hunyengeri hwenyika."
"Rhetoric hunyanzvi hwekutaura zvakanaka izvo munhu asina chokwadi ichokwadi, uye vadetembi vane basa rekugadzira nhema dzakanaka."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Iwe unoda here kuva munyori? Tevedza aya matipi kubva Umberto Eco
Uffff ndatenda mudzidzisi!
Harry Hole Anodzoka muna 2017 - New Novel uye Movie